ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကို ဗာတီကန် အတည်ပြု
ဗာတီကန်၊ သြဂုတ် ၂၈
လာမည့်နိုဝင်ဘာလအကုန်တွင် မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံများသို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်လာရောက်မည်ဟု ဗာတီကန်က ယနေ့ အတည်ပြု သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
၁၆ ရာစုက ထင်ရှားခဲ့သော မြန်မာဘုရင်တစ်ပါး ကြွချီရာလမ်းကြောင်းအတိုင်း စက်ဘီးစီးနင်းသည့် ခရီးစဉ်သစ်တစ်ခုသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အလုပ်အကိုင်များ ပိုမိုဖန်တီးရန်နှင့် နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည့် နိုင်ငံသားတို့ကို ထုတ်ဖော်ပြသရန် ရည်ရွယ်သော ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ သောမတ်စ် ကင်း(န်) ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံ – ငြိမ်းဆုဝေကျော်စိုး နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျန်ဒေသများနှင့် အဆက်ပြတ်ပြီး.
မန္တလေးဆီဒိုနားကို Hilton Mandalay အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်မည်
မန္တလေးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Sedona Hotel Mandalay ကို Hilton Mandalay အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲကာ ယခုနှစ် စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ “ဆုတံဆိပ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အရမ်းပဲ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်” ဟု Hilton.
ရခိုင်အဆိုဆုံးဖြတ်ရာတွင် တပ်မတော်သားချင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရပ်တည်မှုကွဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တည်ငြိမ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အဆိုတစ်ခုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်း သဘောထားပြောကြားကြရာမှာ တပ်မတော်သားနှစ်ဦးအကြား ရပ်တည်မှု ကွဲပြားခဲ့ပါတယ်။
အပြောင်းအလဲတစ်ခုဆီကို ဦးတည်နေတဲ့ စက်သုံးဆီဈေးကွက်
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ- သိမ့်မွန်စိုး (J)
အစွန်အဖျားက တာဝါတိုင်များ(ဝါ) တယ်လီကိုရဲ့နောက်ဆုံးစိန်ခေါ်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစွန်ဆုံးဒေသများတွင် ဆက်သွယ်ရေးပိုင်း အခက်ကြုံနေသည့် ပြည်သူများကို ချိတ်ဆက်ပေးရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ဆက်ဆံလာနိုင်စေရန် သီးခြားလွတ်လပ်သော မိုဘိုင်းဖုန်းတာဝါတိုင် ကုမ္ပဏီများက ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
မောင်တောတိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်သူများအား အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် အစိုးရက ကြေညာ
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၅
မောင်တောဒေသတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများအား အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် အစိုးရက ယနေ့ညပိုင်းတွင် ကြေညာလိုက်သည်။
မောင်တောတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၂ ဦးအထိရှိလာ၊ တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မောင်တောဒေသတွင် ပစ်ခတ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာလည်း ၇၂ ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးက ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၌ တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ၊ အနည်းဆုံး ၃၂ ဦးသေဆုံး
မောင်တောခရိုင်အတွင်းရှိ ရဲကင်းများနှင့် ရဲစခန်း ၂၀ ကျော် ယမန်နေ့ညက တစ်ပြိုင်တည်း တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် လက်ရှိအချိန်အထိ တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။